Banyere Anyị - Jiangxi Yoho Technology Co., Ltd.
Oge Izu Osisi
Okenye bulie akwa na akwa
Edebanyela aha na Jiangxi yoho teknụzụ Co., Ltd.
2018! Ọ dị na nkwụsị nke jiangxi, hubei, anhui na hunan, mpaghara jiujiang akụ na ụba na teknụzụ bụ ama ama ọdịbendị ama ama na ndịda nke osimiri Yangtze, ugwu na osimiri nwere akụkọ ihe karịrị afọ 2200.And dị nso na ugwu China nke ama ama lushan, mmiri na-egosipụta jiangda sea, lu yun asaa ógbè okporo ụzọ, okporo ụzọ dị elu abụọ ogologo na otu kwụ ọtọ, okporo ụzọ mepụtara, ọnọdụ ala dị elu, na-enyere mmadụ aka ịba amata njiri nke mmepe ụlọ ọrụ!
Engagedlọ ọrụ ahụ etinye aka na uwe ogologo ọkpa ụmụ nwanyị, uwe ogologo oge nke enweghị nchekasị, akwa akwa okenye, akwa nhicha ọpụpụ, matarasị na ihe ndị ọzọ nwere ike ịsachasị akụrụngwa nyocha na mmepe, mmepụta na ire ahịa. uwe ogologo ọkpa maka oge nsọ nwanyị na uwe ogologo oge okenye, nke mebiri echiche ọhụrụ banyere nlekọta nsọ nwanyị ọdịnala ...
Iguzosi ike n’ezi - ala nke Kun! Onye nwayọ na-eburu omume ọma, iguzosi ike n'ezi ihe na omume ọma bụ ntọala nke ndị ezigbo mmadụ, njiri mara mmụọ ụlọ ọrụ, na isi nkuku nke ịdị adị nke ndị isi.
Innovation - "ọbụghị n'elu, ọ bụghị n'akwụkwọ, ọ bụ naanị ezigbo, naanị nnwale" bụ "ụkpụrụ" mmụọ mmụọ Yoho. "Innovation" rụpụtara uru ọrụ onye ọrụ ọ bụla! Mmezu nke ika, mmezu nke mmepe mmepe! Kwalite ọganihu na teknụzụ n'ime ụlọ ọrụ!
Yoho Teknụzụ bụ ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na nyocha na mmepe, mmepụta, ahịa na mgbe azụchara nke ụmụ aka na ngwaahịa ọcha ụmụaka! Pọọsụ nhicha akwa, akwa akwa, akwa akpa akwa, uwe ogologo ọkpa, akwa nwa, akwa ụmụaka, akwa akwa, ọgwụ ndị ọzọ na ihe ndị ọzọ. O nwere ulo omumu nhicha ocha di elu na otutu R&D
Site na atụmatụ ika ahụ, mmesi obi ike dị mma na nrụpụta ngwaahịa dị ka asọmpi isi, Yoho Technology guzobewo netwọ ahịa na sistemụ maka ọrụ na-ekpuchi mba ahụ dum. A na-ebuga ngwaahịa ndị ahụ na United States.
South Korea, India, Brazil, Indonesia, New Zealand, Australia na obodo na mpaghara ndị ọzọ, wee nweta ntụkwasị obi nke ndị ahịa na imekọ ihe ọnụ ogologo oge. Companylọ ọrụ ahụ na-etinye ezigbo mkpa maka akụrụngwa
O guzobela nkwado mmekọrịta ya na ọtụtụ ụlọ ọrụ ama ama na ụlọ na mba ofesi. Na imekọ ihe ọnụ, ọ na-ejigharị usoro mmepe nke ndị mmekọ na ezigbo okwukwe ma na-enyekwa ndị mmekọ asọmpi niile.
Ngwaahịa ọhụrụ na-egosipụta ọrụ zuru oke na ebumnuche nke ọrụ ntọala ala!
okwu .18zọ No.109 Gangxing, Chengxigang District, Jiujiang City, Jiangxi Province, China.
ozi ịntanetịzụọ ahịa@jxyouhe.com